Isha Mari Qodobadii Ugu Muhiimsanaa ee Laysku Shirkii Soomaalida ee Lodon. – Radio Daljir
Maajo 11, 2017 6:40 g 2
Magaalda London waxaa lagu soo gabagabeeyay goor dhoweyd shirkarrimaha Soomaaliya oo ay marti gelisay dowladda Britain.
Shirka waxaa lagu soo gabagabeeyay shir Jaraa’id oo ay wada qabteen shirguddoonka Wasiirka Arrimaha dibadda UK, madaxweynaha Soomaaliya iyo Xoghayaha guud ee Q/Midoobay.
Madaxda ka qeybgashay shirka ayaa si weyn uga hadashay xaaladda ammaanka Soomaaliya iyo sidii Soomaaliya looga caawin lahaa inay si buuxda ula wareegto masu’uuliyadda ammaankeeda.
Waxaa sidoo kale kulankan ka qeybgalay madaxda dalalka ku tabarucay howlgalka AMISOM. Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta, ayaa ku baaqay in 400 oo askari oo dheeraad ah lagu daro ciidammada AMSIOM oo gaaraya hadda 222,000. Waxa uu sheegay in AMISOM aysna ka bixi karin Soomaaliya ilaa iyo inta si buuxda loo dhisamyo ciidammada qaran oo ay Soomaalid leedahay.
Xoghaya guud ee Q/Midoobay ayaa codsaday lacag gaareysa 900 Milyan oo doolar oo wax looga qabto abaaraha Soomaaliya ka jira si looga hortago in macaluul dadku u dhintaan.
Man Zaki Adam 4 years ago
Radio Dajir waa warbaahin Madax banan shacab keeda usotabisa Arimaha siyaasadda
shirka ka dhacay London Hadaan fikir kayga ka dhiibto waxaan dhihillaha shirar noocano kalle hada kahor waa lagu qabtay waxa kaso baxaya shirka maysan hir gallin kanna somalia waxan ugu baqaya Madaxdeene midaysan hada Meesha aaden wax ka keenna ma aham iska taag hanna. lahir galiyo qodobadda ka soo baxay shirka
Asc bahda Daljir run Ahaantii qodobada kasoo baxay shirka London wan sooo dhaweenayaa balse madaxda soomalida waxaan ugula talin lahaaa in wax walboo lagu heshiiyo in laga dhabeeyo Qodabada shirkaasna uusan noqon Qoraal warqad lagu qoro misana bada lagu shubo Somalia iyo nolal